Home News Dowlada Qatar oo ka Dalaaleeyneeyso Soomaaliya Iyo Beesha Caalamka ,Si Malaayiin Doolar...
Dowlada Qatar oo ka Dalaaleeyneeyso Soomaaliya Iyo Beesha Caalamka ,Si Malaayiin Doolar loosiiyo Kooxda Qiyaano Qaran
Dowlada Qatar oo aad u daneeyneeyso in ay burburiso Xasiloonida Siyaasadeed ee dalka ka jirta ayaa waxaa ay malaayiin doolar ku bixisay Sidii Fowdo looga abuuri lahaa,iyadoo adeegsaneeyso shaqsiyaad Laaluush qaata-yaal ah islamarkaana ay soo dirsatay.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada dowladda Qatar Sultan Bin Saad Al Muraikhi ayaa sheegay in Dowlada Soomaaliya u raadinayaan dhaqaalle si ay u fududaadaan Fulinta Howlaha qarsoodiga ah ee Qatar ka wado soomaaliya,Beesha Calamku ayuu sheegay in ay ka codsanayaan in ay shaqaalle Dheeraad ah soo yaboohaan.
Waxaa ay u muuqataa in Qatar ay dhaqaalle yareeysay islamarkaana ay dooneeyso Hab kale oo ay kusii Masruufto Dulaaliinta Villa Soomaaliya Jooga sidaasi ayeeyna baaqeen usoo saareen sida ay muujinayaan Xogo hoose oo soo baxaya.
“Tan waxaa kaliya lagu gaari karaa dadaal dhab ah oo mideysan, kordhinta taageerada Soomaalida, ka dhabeynta xushmeynta madaxbanaanida Soomaaliya, inaan la faragelin arimaha gudaha Soomaaliya, iyadoo la eegayo sharciga caalamiga”. Sultan Bin Saad
“In la siiyo taageero buuxdo oo looga caawinayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo la tixgeliyo xoojinta wada shaqeynta dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyadoo dhinac aan lala safaneyn”. Ayuu sidoo kale yiri wasiiru dowlaha madaxtooyada Dowladda Qatar.
Hadalkaan ayaa ah Mid lagu afmaceeysanaayo hase’yeeshee Gunta ka dambeeysa waxaa ay tahay in la Masruufaayo Dulaaliinta Qatar ee Jooga Madaxtooyada,Waxeeyna arinkaan ceeb ku tahay Madaxweyne Farmaajo
Previous articleItoobiya oo Ambassador Ridwaan Xuseen u Magacaawday Safiirka Eritrea
Next articleShaqsi Walbo oo Nacamleeye u noqda N&N Meel xun ayeey uga Tagayaan Sida Saalax iyo C/qaadir Jaamac
Xarun lagu sameeyn jiray Dukumintiyo been abuur ah oo la...
Fear over fresh fighting near Mandera